'Soomaalida waxay haystaan fursad' – W/Q: James Swan
Thursday September 03, 2020 - 20:12:23 in Wararka by Mogadishu Times
Qaramada Midoobay ayaa 75 sanno jirsaneysa sanadkan. Soomaaliya waxay ahayd xubin ku faanta xubinimadeeda oo ka tirsan QM 60 sanno oo ka mid ah sannadahaas. Qaramada Midoobay waxaa laga abuuray danbaskii/burburkii ka dhashay Dagaalkii Labaad ee Ad
Qaramada Midoobay ayaa 75 sanno jirsaneysa sanadkan. Soomaaliya waxay ahayd xubin ku faanta xubinimadeeda oo ka tirsan QM 60 sanno oo ka mid ah sannadahaas. Qaramada Midoobay waxaa laga abuuray danbaskii/burburkii ka dhashay Dagaalkii Labaad ee Adduunka, iyada oo ujeeddadu ahayd in la isu keeno ummadaha iyo dadyowga si loo ilaaliyo nabadda iyo amniga, sarena loo qaado nolosha dadka meel kasta. Maanta, Qaramada Midoobay waxay leedahay dhinacyo badan. — Waa mabaadi' iyo ballanqaadyo lagu maamulo xiriirka ka dhexeeya dowladaha laguna ilaaliyo xuquuqda dadka meel kasta oo ay joogaan, iyada oo loo marayo Axdiga Qaramada Midoobay, Baaqa Caalamiga ee Xuquuqda Aadanaha, iyo heshiisyo kale oo badan.
Soomaaliya iyo meelo kaleba, hay’adaha Qaramada Midoobay sida Ururka Caafimaadka Adduunka, Barnaamijka Cuntada Adduunka, Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay, Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay ayaa caawiya malaayiin dad ah maalin kasta. QM waxay la shaqeysaa dowladaha si dadka loo siiyo fursad ay ku helaan cunno, hoy, daryeel caafimaad iyo waxbarasho. QM waxay taageertaa abuurista shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah, waxay ka caawisaa ka hortagga iyo xallinta colaadaha, waxay dhistaa nabadda waxayna kobcisaa dib-u-heshiisiinta, waxayna dowladaha siisaa taageero wax ku ool ah oo ku saabsan arrimo fara badan – laga billaabo la dagaallanka musuqmaasuqa iyo awoodsiinta dadka naafada ah. Shaqadeeda waxay isugu jirtaa mid muuqata iyo mid aan la taaban karin.
Hindisahan oo loo yaqaano QM75 wuxuu ku saabsan yahay wada-hadal – oo Qaramada Midoobay ay rabto inay ku dhageysato waxna ka barato, iyo inay kala shaqeyso dadka iyo degaannada ugu badan ee kala duwan ee suurtagal ah. QM75 wuxuu dadka waydiinayaa meelkasta oo ay joogaan inay "ku soo biiraan sheekada” ayna soo bandhigaan fikrado wax looga qabanayo caqabadaha na horyaalla bulsho caalami ahaan.
Si loo helo aragtidooda iyo rajadooda, bahda QM ee ku sugan Soomaaliya waxay qabanaysaa wadahadal khadka internetka – oo si toos ah looga soo tebinayohttps://www.facebook.com/UNSOMALIA6-da Sebtembar – oo lala yeelanayo xubno ka tirsan Guddiga La-talinta Dhallinyarada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya si loo dedejiyo dooda aragtiyona looga helo Soomaalida. Waxaan sidoo kale idinku martiqaadeynaa inaad nala wadaagtaan aragtidiina idinkoo u maraya sahan aad ka heli kartaan halkan:https://un75.online/?lang=som.
James Swan – Waa ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
AFEEF: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan warkii.com. warkii.com, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir qoraaladaada warkii.com@live.comMahadsanid